Shiinaha STE Beijing Stelle Laser 4 mashiinka mashiinka weyn ee diode Tattoo ka saar Nd Yag IPL RF DHAMMAAN 1 warshadood iyo alaab-qeybiyeyaal |Stelle
STE Beijing Stelle Laser 4 mashiinka mashiinka weyn ee booska diode Tattoo ka saar Nd Yag IPL RF ALL gudaha 1
Meel weyn oo awood sare leh Diode laser + nd yag laser + E-light + RF 4 gudaha 1 mashiinka leysarka ee shaqeeya ee badan.
Gacanta 1:Awoodda weyn ee Diode laser waxay gacanta ku haysaa timaha ka saarista
Tilmaamid DiodeLaser IPL/SSR/SHR/E-light Nd:Yag Laser RF
Cabbirka barta 15*30mm+15*10mm 15*50mm (12*30mm ikhtiyaari ah) 6mm 20/28/35mm
* 2000W koronto oo loogu talagalay E-lightIPLSHR E-light) nidaamka
DiodeGacanta Laser: 20 Milyan oo Xabadood, Isha Laser-ka Isku-xidhan ee Maraykanka
2 in 1 boos cabbir
* Bar weyn: 15x30mm.Waxaa loo isticmaali karaa daawaynta aagga weyn, sida timaha dhabarka.Iyada oo cabbirka sidaas u weyn,
waa mid aad waxtar u leh oo waqti badan ku badbaadiso kor iyo hoos
* Meel yar: 15 * 10mm.Waxaa loo isticmaali karaa meel yar, sida timaha bishimaha ama timaha sawirka, waxay sidoo kale kaa caawin karaan inaad hesho xariiq gadh qurxoon ama qaabka sunniyaha.
Sida loo xalliyo heerka socodka biyaha dhibaatada hoose ee diodemashiinka timaha ka saarista laser?
Heerka qulqulka biyaha dhibaatada hoose waa mid ka mid ah dhibaatada caadiga ah ee salon qurxinta iyo diodetimaha laysarka oo laga saaromashiinka iibiya.Laakiin waxaa jira xalal dhammaystiran oo naadir ah oo lagu xallinayo heerka qulqulka biyaha dhibaatada hoose.
Halkan waxaan ku sharixi doonaa sababta dhibaatada heerka socodka biyuhu u yimid hooseeyo?
Iyo sida loo xalliyo dhibaatada noocan ah ee heerka socodka biyaha hooseeya?
Marka hore waa in aan kala sheegnaa in heerka socodka biyuhu uu hooseeyo uu ka duwan yahay socodka biyaha.Waxay la xiriirtaa heerka socodka biyaha.Markaa kuma xidhna oo kaliya bambooyin, laakiin sidoo kale waxay la xidhiidhaa dareeraha biyaha, kombarada qaboojinta iyo kanaalada biyaha ee gacanta ku jira.Aad bay muhiim ugu tahay nidaamka dib u warshadaynta biyaha oo buuxa.
Marka mishiinadaadu muujiyaan alaarmiga soo socda ayaa qoray heerka socodka biyaha hooseeya?
Fadlan isku day inaad hubiso oo aad tijaabiso mishiinka timaha ka saaraya laysarka sida soo socota:
1. Inta badan sababta heerka socodka biyuhu hooseeyo waa sababta oo ah kanaalka yar ee gacanta ku jira ayaa xannibmay.Marka hore waa in aad ka saartaa gacan-ku-xidhaha oo haddana dib isugu xidho si aad u aragto in ay fiicnaan doonto iyo in kale.
Haddi aanay weli ok, ka dib ka qaad gacanta oo ka afuufo boodhka gudaha gacanta adigoo isticmaalaya bamka hawo sida kuwa soo socda.Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qalabka hawada lagu garaaco ama la isku duro.
Ka dib markii aad ka afuufo boodhka iyo hawada gudaha kanaalka yar ee gacanta, waxaad dib u hubin kartaa mar kale socodka biyaha haddii ay ok iyo haddii kale?
2. Sababta labaad ee heerka socodka biyuhu hooseeyo waa matoorada biyuhu oo aan shaqayn 100%.Mashiinka timaha ka saarista laysarka waxaa laga yaabaa inuu ka kooban yahay dhowr bambooyin yaryar ama hal bam oo keliya.Waa inaad furto kiis ka saarista timaha laysarka, hubi wakhtiga iyo danabyada dhammaan bambooyinka si aad u aragto in ay ku shaqeyso 100% hufnaan!
3. Midda saddexaad waa dareeraha biyaha oo jabay.Fadlan ka saar dareeraha biyaha oo afka ku afuufo.Haddii aad maqasho taageerayaasha gudaha oo afuufaya oo soo jeestay dhib malaha.Kadib waxaad dib u dajin kartaa dareeraha biyaha si uu u sii shaqeeyo.
4. Sababta ugu danbeysa ee heerka socodka biyuhu hooseeyo waxaa laga yaabaa inay ka yimaadaan filtarrada biyaha iyo filtarrada Ion.Maadaama filtarrada muddo dheer la isticmaalo iyada oo aan isbeddelin.Markaa waxaa jira boodh oo uma cadda inay shaandhaynta shaqaynayso.Markaa waa inaad beddeshaa filtarrada cusub si aad jidka biyaha uga dhigto mid nadiif ah.
Hore: qiimaha warshadda 3 in 1 ipl elos laser diode laser 808 nm seddexle mawjad diode laser mashiinka timaha saarista walaal midabka leysarka ani iyo alex q bedelay nd yag laser elos iplmultifunction qurxinta mashiinka qurxinta ee salon spa
Xiga: Diode laser timaha ka saarida Nd Yag Ipl Ipl Laser Machine Medical Aesthetic Equipment Diode Laser OPT/IPL Nd Yag Laser Machine
CE waxay ogolaatay 3 in 1 mashiinka quruxda badan
Qiimaha Warshadda Jumladda Cusub ee Diode Laser Timaha Dib u...
Iibinta ugu sareysa 808nm Diode Laser IPL SHR SSR E-lig...